June 27, 2020 - PARIJATMEDIA
यौन खेलौना’बाट हुने फाइदा र बेफाइ’दा के-के हुन् ?
डा. सुमनराज ताम्राकार दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि हामी घरभित्रै बस्न बा-ध्य छौँ । यौ-न पा’र्टनर नहुने व्यक्तिले यौ-नसु-खबाट विमु’ख हुनुपर्ने बा-ध्यता बढ्दो छ । जब-र्जस्ती यौ-न चा-हनालाई दबा-उन खोजेको खण्डमा मान-सिक स’मस्या निम्तिन बेर लाग्दैन । यस्तो परिस्थितिमा यौ-न खे’लौना राम्रो विकल्प हुन सक्छ । विवाहपूर्व यौ-नस’म्बन्ध अस्वीकार्य हुने हाम्रो जस्तो समाजमा यौ’न खे’लौनाको उपयोग गतिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले पनि नेपालका शहरी क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि यौ-न खे’लौनाको बिक्रीवितरण बढ्दो छ । यौ-न खेलौ’ना एक जनाले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा कुनै पनि यौ न रो ग सर्दैन । ग र्भधारणको चि’न्तै हुँदैन । देशमा अहिले यौ-न अ-पराधका घ-टना बढिरहेका छन् । पो-र्नोग्रा-फी वा यस्तै अन्य कुनै कारण विकसित आफ्नो क्षणिक यौ-न उत्ते-जनालाई म त्थर पार्न यौ-न खेलौ-नाले सघाउने हुनाले यौ-न अ-पराधमा कमी ल्
यी ठग डाक्टरः जो झुक्काएर बने ६० सन्तान’का बाबु
नेदरल्यान्ड्सका एकजना चिकित्सकले गर्भाधारणको स मस्या लिएर आउने आफ्ना बिरामीलाई वी र्य परीक्षण गर्ने बाहानामा झुक्काएर आफ्नै वी र्य दिइ ६० सन्तानको बाबु बनेको खुलासा भएको छ । सन् १९८० देखि २००९ सम्म नेदरल्यान्ड्सको ‘फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट क्लिनिक’को प्रमुखमा कार्यरत् डा.कारवातमाथि गर्भाधारणको उपचारकाक्रममा हजारौं महिलाहरुलाई आफ्नो वी र्य दिएको भन्ने आरोप लागेको छ । डा.कारवातको ८९ वर्षको उमेरमा गत महिनामात्रै मृत्यु भएको थियो । मृत्युअगाडि उनले आफ्नो डीएनएको नमुना सुरक्षित राख्न चिट्ठी लेखेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । निवासी ३० वर्षीय जोय हुडम्यानले डा.कारवाटको तस्वीर देखर आफूजस्तै लागेपछि यसबारे अध्ययन गरेका थिए । उनले अस्पतालमा गएर जब डीएनए परीक्षण गराए, तब थाहा भयो, उनी डा.कारवातका सन्तान् हुन् । हुडम्यानले भने–‘जब मैले डाक्टरको फोटो देखें चकित भएँ । अब यो घट ना अदालत पुगेको छ । म
उपत्यकामा आजै थपिए ५ जना को’रोना संक्रमि’त
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज ५ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड(१९)पोजिटिभ देखिएको छ । पाटन अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उपत्यकामा थप ५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका थपिएका नयाँ संक्रमित काठमाडौं र भक्तपुरका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले शनिबार काठमाडौंमा १ महिला, ३ पुरुष र भक्तपुरमा १ पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। उपत्यकामा ५ सहित आज देशभर ५ सय ५४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै सङ्क्रमितको कुल संख्या १२ हजार ३ सय ९ पुगेको छ । डा. गौतमले नेपालमा ७७ जिल्लामै कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको बताए। त्यस्तै आज १ सय ३६ व्यक्ति कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ
संसारकै सबैभन्दा वृद्ध ११४ वर्षका यिनले कस’री जिते को’रोना ? संसार चकित्
बीबीसी । संसारकै सबैभन्दा बढी उमेर भएको दावी गरिएका ११४ वर्षका वृद्धले पनि कोरोना जितेका छन् । इथियोपियामाका अबा तिलाहुन वोल्डेमिकाइल नाम गरेका यि वृद्धले कोरोना जितेका हुन् । उनको परिवारको दावी अनुसार उनको उमेर ११४ वर्षको छ । त्यसको अर्थ उनी विश्वकै सबैभन्दा वयोवृद्ध व्यक्ति हुनसक्छन्, तर त्यसलाई पुष्टि गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र भने छैन। असी वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमा कोरोनभाइरस भए उनीहरू बढी जोखिम समूहमा पर्ने बताइएको छ । तर यतिधेरै उमेरका ब्यक्तिले पनि कोरोना जितेको खबरले उपचारमा संलगन चिकित्सकलाई अचम्म बनाएको छ । उपचार पछि घर फर्केका यिनलाई अहिले घरमै नातिले हेर्दै आएका छन्। छिमेकमा पर्ने राजधानी आदिस अबाबामा पहिल्यै निर्धारण नगरिएको जाँचका क्रममा अबा तिलाहुनमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको थियो । बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमलाई डा। हिलुफ अबातेले बताएअनुसार लक्षण देखिनुभन्दा पहिल्य
साप्ताहिक राशिफल – आषाढ १४ गते आईतबारदेखी आषाढ २० गते शनिबार सम्मको
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) साता मिश्रित रहेकोले पढाइ लेखाइमा अल्छि गर्नाले नतिजा भनेजस्तो आउँनेछैन । विलाशी सामान प्राप्तिको योग भएपनि तपार्ईँ आफ्नै कारणले टरेर जानेछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने पति पत्नी विच मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । व्यापार व्यावसाय आम्दानी थोरै हुनेछ लगानी नगर्नुनै राम्रो हुनेछ । शुभचिन्तकको पनि साथ नहुने हुँदा एक्लो पनको महशुष हुनेछ । पहिलेका सम्झौता भङग हुनेछ भने साझेदारहरु विच भनाभन हुने योग रहेकोछ । नोकरि तथा पढाइमा हुने प्रतिस्पर्धामा विजय हुन कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । पुराना समस्या पुनह बल्झन तथा ऋण लाग्नेछ ध्यान दिनुहोला । मुद्दामामिला तथा न्यायिक निकायबाट हुने निर्णयहरु पछिको लागि सार्नु नै उपयूक्त हुनेछ किनकी आज आउने फैसला तपार्ईँको पक्षमा हुनेछैन । खर्च बढ्नाले आर्थिक व्यावस्थापन गर्न असजिलो हुनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समय राम्रो रहे
काठमाडौ, असार १३- नेपाली फुटबल टिमको पहिलो कप्तान सचिव राजबहादुर सिंहको निधन भएको छ । उनको शुक्रबार ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । दमको रोगबाट लामो समय देखि ग्रस्थ रहेका सिंहको शुक्रबार छाउनीमा आफ्नै निबासमा निधन भएको बताइएको छ । र आज नै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ । सिंहले २०४८ देखि २०५० सालसम्म राखेपको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
सुशान्तको मृत्यु गर्नुको प्रमाण म संग छ भन्दै आज आफ्नै साथी पुगे प्रहरीकोमा, प्रेमिकासंग पनि झग’डा भए’को खुलासा !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपुतको निधनका सम्बन्धमा नयाँ मोड सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा नराखेका ब्यक्ति मसग प्रमाण छ भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेपछि घटनामा नयाँ मोड आएको हो । सुशान्तको निधन पछि घटनालाई लिएर अनेक अड्कलवाजी गरिएको छ । उनी मानसिक रुपमा विरामी भएको, डि प्रेशनमा गएको लगायतका अनुमान लगाइएको छ । साथै प्रेमिका रिया चक्रवतिसंगको झगडा भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । प्रहरीले रियासंग पनि वयान लिइसकेको छ । सुशान्तका एक जना साथी संदीप सिंह अचानक प्रहरी कार्यालय पुगेर सुशान्तको निधनको कारण मलाई थाहा छ भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेका छन्। उनले त्यसवारेमा प्रहरीलाई जानकारी पनि दिएको बताएका छन् । प्रहरी कार्यालयवाट बाहिर निस्केका उनलाई तत्काल सञ्चारकर्मीले घेरेका थिए । उनले आफुसंग भएको प्रमाण प्रहरीलाई दिएको र संचारकर्मीका माझमा भने समय आएपछि मात्र त्यसवारे
एसईई मार्कसिटमा यस’री दिइने’छ अंक।
काठमाडौँ । जेठ २८ गते बल्ल सरकारले २०७६ सालको एसईई परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। परीक्षा नहुने भएपछि सरकारले आन्तरिक मुल्याङकनका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने र परीक्षा फल साउनसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालयले नै आन्तरिक मुल्याङकनबाट अंक पठाएर नतिजा निकाल्ने चर्चा चलिरहँदा कतिपय विद्यालयमा ‘यति अंक दिनू’ भनेर अभिभावकबाटै पनि दबाव आएको कुराहरु पनि छरपस्ट भइसकेको छ। विद्यालयले पनि अभिभावकसँग अंकमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको शिक्षाविद्हरुले चेतावनी दिइसकेका छन्। यस्तोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ अघि सारेको छ। यसमा आन्तरिक मुल्याङकन कसरी गर्ने र एसईईको अंक निर्धारण कसरी हुने भन्ने स्पस्ट कार्यदिशा दिएको छ। कार्यविधिमा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधित) अन्तर्गत
टिकट काट्न सक्ने नेपाली’हरू स्वेदश फर्किए नसक्ने’हरु खाडीमै अ’लप’त्र
काठमाडौँ, १२ असार । खाडी मुलुकबाट स्वेदश फर्कन जसले जहाज टिकट जुटाउन सके, उनीहरु स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । जसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मरुभूमिमै तड्पिइरहेका छन् । तीमध्येका हुन्, कुवेतको सवाअसालिमस्थित ब्लक नम्बर ३ मा बसेका झापा सुरुङ्गाका उमेश सोती । उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । उनीसहित ६ नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् । बाहिरी तापक्रम ४५ डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बि’ग्रिएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘ज्यान त अन्डा उसिनेजस्तै गु’म्सिएको छ, अरूको कोठामा जाने अवस्था छैन, कोठाबाहिर तातो बाफ आउँछ, हपहपी हुन्छ,’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुुरसँग भने, ‘कुवेतमा यस्तो गर्मी छ, हामीलाई सास फेर्नै गा’ह्रो भइसकेको छ ।’ एसी बनाइदिन दूतावासमार्फत भन्दासमेत कम्पनीले नमानेको उनले बताए । उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत १ देखि ड्युटी बन्द छ ।
पैसा लिएर जग्गा नदिने द’लाललाई महिलाले सडकमा दौडाइ दौडाइ चप्पलले कुटिन्,- बनिन् सामा’जिक संजाल’मा भाइरल
काठमाडौं। पहिल्यै पैसा लिएर जग्गा नदिने एक द’लाललाई एक महिलाले सडकमा दौडाइ दौडाइ चप्पलले कु’टेको भिडियो सामाजिक संजालमा चर्चामा छ । कोयलांचलको नामबाट चर्चित झारखण्ड राज्यको धनबाद शहरमा यी द’लाल अचानक सडकमा देखिएपछि ती महिला रि’सले आ’गो भएकी थिइन् । महिलाले सडकमै दलाललाई पैसा लिएर जग्गा नदिएको आ’रोप लगाउँदै ला’त मु’क्का र चप्पलले कु’टपि’ट गरिन् । द’लाललाई कु’टपि’ट गरिएको भिडियो तीव्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ । महिलाका अनुसार ती द’लालसँग ४ लाख रुपैयाँमा जमिनको लेनदेन तय भएको थियो । त्यसमध्ये २ लाख रुपैयाँ नगद र २ लाख रुपैयाँको चेक दिने सहमति भएको थियो । तर द’लाले २ लाख रुपैयाँ नगद लिएपछि पनि उनलाई जमिन दिएनन् । महिलाका अनुसार लक्ष्मी विश्वकर्मा नामका दलालले जग्गा दिने नाममा उनीसँग २ लाख रुपैयाँ लिए र जग्गा दिएनन् । महिलाका अनुसार द’लालले जग्गा दिनुको सट्टा निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै बैंकम